Mxakamada Ciidamada qlabka sida oo Xukun ku riday Rag shabaabka qaraxyada ufarsamayn jiray – Daily Som
By Staff on March 25, 2018 No Comment
Xuno ka tirsan alshabaab ayaa manata waxaa maanta xukuntay Maxkamada Ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya waxaana qoorta galiyo Xabsiyo wakhti dhaadheer.
Xubnaha ka tirsan alshabaab ee maanta xukunka lagu riday ayaa waxaa la soo qabtay Deegaanka Ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho, waxaana lagu soo qabtay guri halkaas ku yaala iyag oo diyaarinayaqaraxyo ay xiligaas ku mashquulsanaayeen.
Gudoomiyha Maxkamada Ciidanka oo ku dhawaaqay xukumka ayaa sheegay maxamad cabdiraxmaan Mxamuud oo lagu eedeeyay in uu alshabaab uqaabilsanaa qarxayada, ahaana bare qaraxyada sida loo sameeyo bare xunha kale ee shabaab ayaa lagu helay danbigaas waxaana Lagu xukumay Xabsi daain.
siodoo lkale Gudoomiyaha maxkamada ayaa sheegayJamaal maxamed Cali oo isna lagu eedeeyay in uu xubin ka ahaa shabaab qaabil sanaana Samaynta qaraxuada lagu helay dabigaas asigane lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah waxaana taas la wadaago asiga Axmed aadan wareer oo isagu uqaabilsanaa alshabaab qaraxyada.
Shabakadaan maanta ay xukunka ku riay maxkamada ayaalagu soo qabtay guri ku yaala Ceelasha bioyaha, xili ay ku howlanaayeen diyaarinta qaraxyo sida ay sheegtay maxkamada.
Mxakamada Ciidamada qlabka sida oo Xukun ku riday Rag shabaabka qaraxyada ufarsamayn jiray added by Staff on March 25, 2018